FARITRA SAVA : Voaroaka amin’ny asany ny Talem-paritry ny orinasa Otiv ao an-toerana
Misy rivotra mahery mitsoka ankehitriny ao amin’ny Otiv Sava. Voaroaka amin’ny asany ny Talem-paritr’ity orinasa ity, tany an-toerana, tamin’ny herinandro teo noho ny voalaza fa fakana « commission » amin’ny mpanjifa. 19 décembre 2016
Nisy iraka avy any Antananarivo tonga any an-toerana ary tsy vitsy ireo olona mitaraina amin’ny fomba fiasan’ity tompon’andraikitra ity. Tsy vitan’ny voaroaka amin’ny asany fa natao famotorana ihany koa ity Talem-paritra ity taorian’ny nahatratrarana ilay olona naka sy tsy namerina vola mitentina 105 tapitrisa Ariary tao amin’ny Otiv Antalaha, tamin’ny taon-dasa.
Tao amin’ny seranam-piaramanidina ao Antalaha no voasambotry ny mpitandro filaminana ity farany tamin’ny herinandro teo.
Nambaran’ilay olona nahazo io volabe io fa nahazo ampahany tamin’izany ny Talem-paritra Otiv Sava ka izany nahatonga ny famotorana natao an’ity farany. Raha mitombona ny voalazan’ity voalohany dia mety hiafara amin’ny fanagadrana io tompon’andraikitra io ny raharaha.
Vola very tao amin’ ny Otiv Ampanefena
Mahakasika izay olan’ny Otiv any amin’ny Faritra Sava izay ihany dia mbola mitohy ny fanadihadihana mahakasika ny halatra vola mitentina 160 tapitrisa Ariary tao amin’ny Otiv Ampanefena, tamin’ny alarobia teo. Nasain’ny Tonian’ny mpampanoa lalàna nidina tao Ampanefena ny Zandary misahana ny heloka bevava, ao Sambava tamin’ny herinandro teo ka natao famotorana ihany koa ny mpiambina ny biraon’ny Otiv Ampanefena sy ny tompon’andraikitra vonjimaika ao amin’io rafitra fampindramam-bola madinika io, izay voalaza fa zaobavin’ny Talem-paritry ny Otiv Sava teo aloha.
Naiditra am-ponja vonjimaika ilay mpiambina taorian’ny famotorana natao azy fa mbola tsy niatrika Fampanoavana kosa araka ny loharanom-baovao ity farany. « Milaza ny tenany fa marary ny Tale mpisolo toerana vonjimaika an’ny Otiv Ampanefena ka nahazo fiatoana tsy hiasa tany amin’ny mpitsabo ary niakatra any Antananarivo ny alarobia teo, fotoana izay nisian’ilay hala-bola. Ny tena mahagaga amin’ity raharaha ity, raha tsy nangataka ny fianakavian’ny « caissière » izay naiditra am-ponja vonjimaika miaraka amin’ny vadiny tsy natao famotorana ilay mpiambina amin’ny alina sy ny zaobavin’ny Talem-paritra.
Tsy mazava ny fomba fiasan’ny Kaomandin’ny zandary ao Ampanefena mahakasika ity raharaha ity. Soa ihany fa nandray andraikitra ny Tonia mpampanoa lalàna », hoy ny fanazavana nataon’ny mpikambana vitsivitsy ao amin’ny Otiv Sambava.
« Hitanareo mba rariny ve ny fanaovan’ny olona iray milaza fa marary « Aller et retour » Sambava-Antananarivo- Sambava ao anatin’ny telo andro ? Amiko manokana tokony hanaovana fanadihadiana lalina ity raharaha ity. Iza no milaza amitsika fa tao tokoa ny vola mitentina 160 tapitrisa Ariary voalaza fa nisy nangalatra tamin’io andro io ?
Sora-bola milaza izany fa tsy nisy nahita na nanamarina izany. Aza hadinoina fa io tompon’ andraikitra vonjimaika io no mitana ny fanalahidin’ny « coffre-fort »n’ny Otiv Ampanefena izay nolazainy fa hadinony tany an-trano rehefa nanontany ilay « caissière ». Naiditra am-ponja vonjimaika ity farany sy vadiny satria nambaran’ny mpiambina amin’ny alina fa izy ireo no naniraka azy hiala amin’ny toeram-pisany. Nefa tsy izay ny zava-misy araka ny volazan’ny « caissière ».
Tsy fantatra iza no mandainga amin’izy ireo ka izany mahatonga anay milaza fa tokony samborina izy rehetra ary hatao fanadihadiana lalina. Maninona ohatra ny mpiambina amin’ny alina irery no nakan’ny Otiv « avocat » hiaro azy ? », hoy ihany ireto farany. Ho taterina amitsika eto ny mety ho tohin’ity raharaha ity.